Dhignaashada lana taageeraa qaabab Media for Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah tacsiyeeyaan
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah Console waxaa loo qorsheeyay "inuu u ciyaaro qarni cusub ee kulan". Laakiin miyaad taqaan in ay sidoo kale loo isticmaali karaa aalad geeyo si ay u sii qulquli aad video deegaanka si ay TV. Laakiin ka hor inta aanay is bilaabay, waa in aad hesho in la ogaado in qaab video aad waa la jaan qaada ah Console Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah. Hadda waxa kaliya taageeraa AVI, MOV, MKV, MP3, wmv iyo WMA.
Tusmada Stream Isticmaalka Server DLNA ah
Si aad u sii qulquli aad content, waxaad u leedahay in ka hor-rakibi Madaxweyne Siilaanyo Oo Music for hoorto music iyo Madaxweyne Siilaanyo Oo Video muuqaal iyo sawir. Labada of barnaamijyadooda la heli karaa oo lagala soo bixi xor ka ah dukaanka One Madaxweyne Siilaanyo ee. Taasi inta badan maxaa yeelay, Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah oo keliya u shaqeyn doonaa sida 'qof qaata' oo halkan ka download ee app noqon doono midka ugu shaqo 'aqbalana' aad u tacsiyeeyaan. Qalabka Your DLNA-socon, ayaa dhanka kale, u shaqeyn doonaa sida 'xukuma'.
Waxay ku xiran tahay brand iyo model qalab, app DNLA ku saabsan qalabka aad u laga yaabo in ay mar horeba la preinstalled. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u bilowdo (oo aad u bixiso ogolaanshahaaga si ay u wadaagaan waxyaabaha) server DLNA on qalab aad u marayo Goobta menu 's. Waxa kale oo suurtogal ku dheehan yahay waxyaabaha il-awood u xaddidan yihiin files kaliya qalabka. Haddii taasi ay dhacdo, waxa aad had iyo jeer ka soo dejisan kartaa app a free Internetka (ie Skifta) inay u dhaqmaan sida dhex-dhexaadin ah.
Wax kale oo aan ahayn, fadlan hubi in labada aad Console iyo qalab DLNA-socon ay ku xidhan yihiin shabakad isku Wi-Fi. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa in aad hubsatid in qalab aad waa taageero ah nooca file warbaahinta iyo codec hor inta aanad bilaabin hoorto ku jira in aad Console dhex server DLNA ah. Haddii aan, waxaad had iyo jeer la xiriiri karto si kama dambaysta video Converter . Waxaa ka mid ah server awood warbaahinta kaas oo awood kuu si toos ah ku dhowaad qulquli dhan ah qaabab wax soo saarka oo aad u malaynayso karaa, iyadoo ilaa 30X dhakhso ee xawaaraha iyo sidoo kale tayada sameecadda ah.
Arrimaha Common of Video ee Radidiyaha
Ma ahan wax aan caadi ahayn in ay la kulmaan arrimaha markuu yimaado in ay dib ugu ciyaaro video ah oo ku kaydsan DVD ama Blu-Ray disc. La mid ah kuwa files warbaahinta in ay soo bixi waxyaabaha ka soo goobaha geeyo taageeray badbaadiyey on ah drive dibadda adag iyo sidoo kale. Inkasta oo ay jiraan ilaa 3 USB dekedaha on One Madaxweyne Siilaanyo ku Console, midkoodna shaqeeyaa haddii ay ku xiran maala ogol ama ay taageerayaan One Madaxweyne Siilaanyo ee. Dhamaan heli kartaa quruxsan niyad-jab marka waxa ay u muuqataa in ay sii macaan oo socon in ay ka horreeyay, 360 Madaxweyne Siilaanyo ka.
Si kastaba ha ahaatee, taasi ma dhammaadka wakhtigii dunida, maxaa yeelay waxaa waajib ah inaad habab kale si ay u awoodaan inay u sameeyaan. Tusaale ahaan, waxaad si dhab ah u abuuri kartaa ama gubi DVD kuu gaar ah la isticmaalayo DVD Creator iyo daawo ciyaaryahanka Blu-Ray aad u tacsiyeeyaan. Waxaad sidoo kale siinayaa ikhtiyaarka ah in ay ama gubi DVD jirka ah ama iyaga ku badbaadin in image file ISO ah. Si fudud waxaad ka akhrisan kartaa iyada oo Guide User fariimo dheeraad ah. Haddii kale, ka akhriso sida loo wadaagi files warbaahinta iyada oo server DLNA on qalabka DLNA-socon ee sida your computer, smartphone ama kiniin.
> Resource > Video > Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ay taageerayaan Media Qaabka